နေခြည်ဦး – DVB
နေခြည်ဦး၊ Dr. Laurel တို့အပါအဝင် ဘလော့ဂါ ၁၁ ဦးကို အမည်ပျက်စာရင်းကြေညာ
နာမည်ကျော် ဗျူးတီးဘလော့ဂါတယောက်ဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦး၊ Dr. Laurel တို့ အပါ အဝင် ဘလော့ဂါ ၁၁ ယောက်ကို Myanmar Bloggers Community က အမည်ပျက်စာ ရင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
မတ် ၃၀ ရက်စွဲနဲ့ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် ကျူးလွန်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် လူသတ် လုပ်ရပ်တွေကို လစ် လျူရှု၊ နှုတ်ဆိတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘလော့၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေကို လူမှုရေး ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းကြောင်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းထဲမှာတော့ နေခြည်ဦး(Beauty by Naychi)၊ ခင်စံပယ်သန်း(Dr. Laurel)၊ ဇေယျာမျိုးတင်(Zeyar Blogs)၊ ရဲရင့်(Ye Yint)၊ သူရိန်အောင်(Bee Lat Pyan)၊ ညိုနိုင်ဝင်း (Terry Win)၊ စောသန္တာမြင့်(I Write I Travel)၊ ရှိုးရှိုးအောင်(Show Show Aung)၊ ပန်ဆု ရည်အောင်(My Workshop)၊ ကျော်ဆုငုံချစ်(Sweet Diary)၊ ဆင်းရွှေရည်ထွန်း(Arizona Beauty)စတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Myanmar Bloggers Community ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဘ လော့ဂါတွေနဲ့ မိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းအတူ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ငှားရမ်း အသုံးပြုတာမျိုးတွေ မပြုလုပ်ကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမေများအဖွဲ့ ၊မမများအဖွဲ့နှင့် ကိုလူချောအဖွဲ့များအား နေခြည်ဦးက ဆန်နှင့်ဆီများ လှူဒါန်း
ဗျူးတီးဘလော့ဂ်ဂါ တယောက်လည်းဖြစ်၊ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးအကျပ်အတည်းကာလမှာ အမေများအဖွဲ့၊ မမများအဖွဲ့၊ ကိုလူချောအဖွဲ့တွေအတွက် ဆန်နဲ့ ဆီတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှူဒါန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကြူလေးက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကတဆင့် မျှဝေထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “သရုပ်ဆောင် နေခြည်ဦးက အမေများအဖွဲ့၊ မမများအဖွဲ့၊ ကိုလူချောအဖွဲ့များအား ဆန် ၂၄ ပြည် တအိအိတ်နှင့် ဆီများလှူဒါန်းပါသည်။ ၁၇. ၁၁. ၂၀၂၀” အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး နေခြည်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးအကျပ်အတည်းကာလမှာ အမေများ အိမ်ရာအတွက် အလှူငွေကျပ် ၁၀ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ သူဟာ BeautyByNayChi အမည်နဲ့ ဗျူးတီးဘလော့ဂ်ဂါတယောက်အနေနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကြောင့် အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ် လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတလက်အနေနဲ့ပါ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်လာနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ပရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးမှုတွေ ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “ရန်သူ”၊ “ဧည့်သည်”၊ “ပုရိသ”၊ “အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြား နေခြည်ဦးရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုကြရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။